Samuel naGorgette Eto'o: Ratidza zvese nezvehupenyu hwavo hwevakaroora! - Tamban RELAY
Samuel naGorgette Eto'o: Ratidza zvese nezvehupenyu hwavo hwevakaroora!
VANHU & VANHUpasi roseSPORT
By Chinde On Nyamavhuvhu 3, 2020
Sezvo sezvavanotaura kuIvory Coast, Georgette mukadzi waSamuel wekufamba nechikepe. Mukadzi anofamba netsoka ndiye anounganidzana nemurume kana asina chinhu uye asati ava chinhu, haabudirire.
Anogara padivi pake nese matambudziko ake, asingazeze kumutsigira zvakanyanya sezvaanogona. Anoziva zvinoita murume wake uye anotarisira kuti amuremekedze kuburikidza nekuroora uye kumuchengeta kana abudirira.
Georgette akasangana naSamuel Eto'o kuFrance. Panguva iyoyo, aive achitarisira bvudzi rekuchengera vhudzi muNantes, iye achiri mudiki Samuel achiri amateur uye achishuva kutsvaga mukirabhu. Akamutsigira muhupenyu hwake hwese kusvika ave iye munhu wese anoziva nhasi.
Mukadzi weAfrica mutsika: "Simuka utsungirire"
Samuel Eto'o paFC Barcelona: "Kana Messi aenda, isu ...
Samuel Eto'o anopindura kumufundisi weIvorius akafanotaura nezvekufa kwake
Samuel Eto'o uye neIvorian mufundisi vakafanotaura nezvekufa kwake
Kana kuti imo nekuda kwedzidzo yake yeAfrica inoraira mukadzi kuti anyarare uye atumire? Seshamwari yeanotamba nhabvu, akatsungirira zvakanyanya. Chekutanga pane zvese, iye haasi wekutanga kumupa mwana.
Iye aive aine izvi "rombo" ndiMarian Pineda, amai vaSpanish vemuSpanish. Paivawo nenyaya yekusabhadharwa alimony iyo yakakonzera mhirizhonga pawebhu. Ipapo pakanga paine opera yesipo "Revenge Porn" muna 2014 naNathalie Koah semutambi mukuru. Izvo zvakagadzira mhirizhonga yepasirese. Chekupedzisira, pane zvese izvo izvo zvatingave tisingazive ...
Georgette Eto'o anogona kunge akangwara, kana iwe uchinge wakaroora kune mukurumbira mubhola muAfrica wenguva dzose, isu tinotakura zita rekuremekedza uye kubwinya kwake kunotiratidzira mune imwe nzira kana imwe. Kufunga kwaGeorgette hakumurambidzi kubva pakuvepo pamawebhu.
Nhoroondo dzakawanda dzenhema dzakagadzirwa muzita rake pamasocial network uye idzi dzinokwezva vanhu vazhinji. Kune mamwe mapeji e fan, anochengetwa nevanhu vakatendeseka zvishoma. Pa Facebook, tinowana semuenzaniso peji "Shamwari dzaGeorgette Eto'o".
Samuel Eto'o akaroora zviri pamutemo musi waChikunguru 06, 2007 uye achinamata musi waChikumi 14, 2016, iye anoratidzwa nemufaro paruoko rwemurume wake pachena, kunyangwe iye "Miedzo" kuyambuka, iyo yakamupa vaviri kubva kuvana vana.
kunobva: https: //afriqueshowbiz.com/samuel-etoo-son-epouse-devoile-tout-sur-leur-vie-de-couple/
Chinde 803 Posts 0 mashoko
Ivory Coast-Eudoxie Yao: "Ini handirara nemurume wemamiriyoni makumi maviri neFAFA!"
France: gore rekodhi yePSG uye Choupo-Moting
Grand P anoratidza zera rake pane seti ye3
Amai vaBeyoncé vanoratidzira kwakatangira zita reyeredzi
Dadju inozivisa nhau dzakanaka paWebhu
Cameroon: maitiro aMaurice Kamto anogadzirira kuratidzira kwake "anti-Biya"
Prev Next 1 pa44